Jordania: Afaho i Taher Nassar! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2011 9:19 GMT
Nitatitra ny Human Rights Watch tany ampiandohan'ny volana Desambra 2010 tany fa i Tahir Nassar, mpisolovava iray sady kandida nirotsaka hofidiana tao amin'ny antenimiera, dia nosamborina sy notànana any am-ponja Jordaniana noho ny fiampangàna azy ho “nihantsy ady eo amin'ny sekta.” Ny helok'i Nassar dia ny fandaharan'asam-pifidianany izay mampibaribary ny fanavakavahana mianjady amin'ireo Jordaniana manana fiaviana Palestiana. Nassar, avy ao Rusaifa, dia tsy tafita tamin'ny fifidianana natao ny 9 Novambra tao amin'ny fari-pifidianan'i Zarqa. Araka ny Human Rights Watch, notànana izy ny 27 Novambra, taorian'ny nandaozan'ireo mpanaramaso fifidianana avy amin'ny sehatra iraisampirenena an'i Jordana.
Naseem Tarawnah namaly:
Ka dia izao no fanontaniana miseho masoandro avy amin'ireo zava-niseho tato ho ato: raha misy olona miantso fampitsahàrana ny fanavakavahana eo amin'ny samy vahoaka àry mitaky fa tokony hitovy ny olon-drehetra, fitakiana iray izay iantohan'ny lalampanorenan'ny firenena rahateo, nahoana io olona io no tsaraina ho nihantsy fifandonan'ny sekta? Ny firesahana tsotra momba ny fanavakavahana sy ny maha-izy ny tena ve dia fikendrena hitarika fifandonana ao amin'ny sekta? Ny firesahana momba an'izany ve dia azo faritana ho heloka bevava?
Nahoana izay ezaka rehetra atao hiresahana mikasika io olana io no tonga dia raisin'ny fanjakana ho fandrehetana afo daholo? Nahoana, eny fa hatrany anaty fifidianana izay na ny fitaovana ampiasain'ny mpirotsaka aza heverina ho azo iadian-kevitra imasom-bahoaka daholo, no kendaina isika rehefa mitaky fa hoe misy olana momba ny maha-isika antsika? Amin'ny fanaovana toy izany, tsy tonga dia manaporofo ve ny fanjakana fa manana olana momba io resaka io tokoa isika e?
Nitondra fanamarihana i Nadim ho setrin'ny lahatsoratr'i Naseem:
soraty amin'ny teny arabo io dia ianao ihany dia efa hahita fa hatory any am-ponja koa ianao
Ao amin'ny Twitter, misy vitsivitsy ireo Jordaniana namaly ny lahatsoratra sy tweet nalefan'ny HRW. Iray isan'ny nanao izany i Yanal, nandefa tweet toy izao:
Tsy dia misy loatra RT (Avy amin'ny mpandika: RT Re-Tweet na fampitàna tweet ) amin'ireo lohahevitry ny @hrw momba an'i #JO avy amin'ireo Jordaniana! Na iray aza! Izay niantso fitoviana dia nogadraina, ary mbola mety hanjo ny maro!
Vondrona iray ao amin'ny Facebook no tsinjo manohana an'i Tahir Nassar, milaza fa misy mpikambana 49 hatramin'ny 20 Desambra. Ny pejy fampahafantaran'ilay vondrona dia milaza fa:
Ity pejy ity dia natokana hanangonan-tsonia ho fanafahana an'ilay mpisolovava Taher Nassar, nirotsaka ho fidiana teo aloha ho ao amin'ny Sixteenth Lower House of Parliament (Antenimieran-doholona , Efitra faha-16).